Ụbọchị My Pet » 12 Atụmatụ Nọrọ upbeat Mgbe Online dịwara
emelitere ikpeazụ: Oct. 21 2020 | 4 min agụ
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike mgbe ụfọdụ na-eche nnọọ mmụọ daa mba. Ọ nwere ike na-eme ka anyị na-enwe ọkụ si, nkụda mmụọ na ọbụna ilu. Ya mere, olee otú ị zere nke a na-eme ka kama online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ime breezy na fun ahụmahụ o nwere ike ịbụ? A bụ ụfọdụ Atụmatụ n'ihi na ị.
– Nabata na ị na-aga izute a ọtụtụ ndị online na gaghị abụ ihe ị na-achọ. Nke ahụ bụ ezi! Ọ bụ akụkụ nke ndibiat. Unu ga-etinye ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ iru n'ime ọtụtụ narị (Adịghị m ekwu ihe a iji mmenyenjo unu na ya nwere ike iru nke a dị elu ma ọ bụrụ na gị ịgụ ọ bụla e-mail). Na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na e nwere ọtụtụ nke ozi na azụ na-apụta. Nabata ya na ọ ga-inye gị nsogbu.
– Nwere usoro maka emeso e-Gburu na kọntaktị. Nke a nwere ike inyere gị aka gbochie ọkụ si na-anọ kpaliri. M na-eji nwere a ọkọlọtọ e-mail na m ga-eji maka ijekwuru ndị mmadụ nke m ga-dị imeghari ubé dabere na onye m na-na ịkpọtụrụ. M maara nke a nwere ike na-aghọta na-abụghị onye, N'ezie ọ bụ nanị otu ihe oru oma ụzọ jikwaa usoro na-anọ elu ume. Mgbe ị nọrọ awa dee ahụ zuru okè e-mail na-enweghị omume (ọzọ), ị ga-aghọta ihe mere m ji na-atụ aro a. Unu nwekwara ike dị iche iche nchekwa n'ime nke ị na-etinye ndị dabere ma na ị nwere mmasị ma ọ bụ.
– Nọgidenụ na-mbụ e-Gburu mkpụmkpụ. M na-adịghị na-atụ aro ka ị ghara inye nsogbu iji mara ndị mmadụ, naanị na ị na-mbụ e-Gburu mara mma mkpirikpi mgbe ị na-echetakwa ha. Ọ bụrụ na mgbe ọtụtụ obere e-Gburu na ị bụ ma ka nwere mmasị na-ekwurịta okwu mgbe ị nwere ike ịga a obere miri na ha. Nke a bụ kpere iji gbochie ọkụ si na aka ya ma ọ bụrụ na ị na-nza nke e-Gburu na mmasị.
– Bugharịa ka 'na onye' ma ọ bụ ekwentị na ngwa ngwa. O doro anya na na-na nchekwa n'uche, m na-agba ume m ahịa na-esi a bụ ndụ n'ezie ụbọchị ngwa ngwa. Nke a bụ n'ihi na ndị mmadụ pụrụ ịbụ nnọọ dị iche iche na ndụ n'ezie si otú ha na-online, na ị ga-amaghị ma ọ bụrụ na ha na-aga na-a kwesịrị ekwesị n'ihi na gị ruo mgbe izute ha na ndụ n'ezie. Iji mezuo nke a adịghị awa Izi ozi azụ na-apụta online, ma ị ga-ala n'iyi a otutu oge ndị mmadụ na o nwere ike ịbụ adabara gị.
– Echegbula onwe gị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na-anata ndị e-Gburu ị na-eziga. Ọ bụrụ na a na-eme m ka ị mara na ọ nwere ike na-ewute na ọzọ adịghị ya n'onwe. Mgbe ụfọdụ, anyị niile na-aga site a akọrọ ọgwụ ebe anyị na-enweta Ọ DỊGHỊ. Ọ dịghị aza ọ bụla nke e-Gburu anyị izipu, ọ dịghị kọntaktị na na. Atụla egwu ma ọ bụrụ na a na-eme gị, Otú ọ dị ọ bụ uru na-ewere ọzọ ebumnobi anya na ihe ị na-e dere na profaịlụ gị na foto i gwa. Ụda nke profaịlụ gị kwesịrị maa enyi, ìhè na-eji obi ụtọ. Ọ bụrụ na ị ka na-enweghị chi ozugbo ị enyocha profaịlụ gị, ịjụ a enyi ọ tụkwasịrị obi ka anya ya n'elu na-enye gị ụfọdụ nzaghachi. Ọbụna ha elele ihe ụfọdụ nke ozi ị na-ezipụ ndị na-eme ka ji n'aka na ha na-agụ OK.
– N'otu aka ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na ị na-eche ka ụfọdụ ozi na ihe ọ bụla na-abịa site, ọzọ echegbula. Gụọ ma na-agbaso nzọụkwụ n'elu. Ọzọkwa mara na nke a bụ otu ebe na m na-atụ aro ndị inyom nwere ike ịbụ na ha oke ike, dị nnọọ ka a na mbụ nzọụkwụ. Ihe m pụtara site na nke a bụ na-aga n'ihu ma na ụzọ mee ihe site n'ịkpọtụrụ na izi ozi ndị na-amasị gị. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị pụrụ ịbụ nnọọ 'oké ụzụ' ma ị nwere ike ọ ga-efu na ịkpọgharịa ọ bụrụ na ị na-eme ọnụnọ gị mara. Jiri gị oke ike ịkpọtụrụ ndị mmadụ na-esi na gị usoro na ebe, na mgbe ahụ dobe nri azụ n'ime gị nwanyị ume ozugbo nkwurịta okwu malitere.
– Ejila ya n'onwe ọ bụrụ na ha akwụsị. Anyị na-niile ọ eme. Ị izute onye online, na ị na-akparị ụka na ha, ọ niile na-aga nke ọma, ndibọp omume ọma, Ikekwe ị na-ọbụna na-arụ ọrụ ruo-arịọ maka a ụbọchị, na mgbe ahụ na mberede 'POOF' ha apụ n'anya na a ígwé ojii nke anwụrụ ọkụ, mgbe a ga-hụrụ ọzọ. Ị sị na ihe jogburu onwe ya? Mere ha na-anwụ? Ọfọn eleghị anya ọ bụghị. O yikarịrị ka ha na-agwa okwu ndị ọzọ online, na onye ọzọ wee na ụzọ, ma ọ bụ ikekwe ha bụbu na ha ka nọ na nzuzo na ịhụnanya na-gosiri azụ na ị nwere a kechioma ụzọ mgbapụ. N'ókè bụ na ị ga-abụ na mgbe mara. Ma na nke a na-eme mgbe niile! Ọ bụrụ na unu maara nke a ọ na-enyere na-ọgbụgba n'ime ya. Mgbe m ntụziaka m inyom ahịa bụghị iji nweta kwa itinye obi ruo mgbe ị n'ezie zutere ya na ndụ n'ezie, na eziokwu ruo mgbe ọ na-egosi na ị na ọ bụ kpọrọ mmasị n'ebe ị. Na ruo mgbe ahụ na ọ bụ nanị otu nhọrọ maka gị nke ọtụtụ. Ejila 'n'anya' onwe.
– Emeso ya niile na a tuo nke nnu. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ ihe ọ bụ. Ma ọ bụrụ na i nwere ike ịnabata ya n'ihi ihe ọ bụ ị ga-enwe a nnọọ mfe oge na ya. Ị ga-izute ụfọdụ oddballs, ị ga-ụfọdụ ndị ị na-eche na-jogburu onwe, ị ga-ikekwe izute ụfọdụ ndị na-amasị gị ma eleghị anya ị ga-onye ị nwere ike a mmekọrịta na-ada na ịhụnanya na-. Otú ọ dị ihe ọ bụla ọzọ na ọ bụ, ọ ga-abụ otu ahụmahụ. Ị ga na-eto eto dị ka onye n'ihi na ya ma na ị ga-esi na-eme mmekọrịta ndị na-abụghị nwoke ibe. Ya mere, anaghị enye, dị nnọọ ijide n'aka na-ewere ya na a tuo nke nnu, na-achị ọchị na ndị enyi gị banyere ya na nwere ụfọdụ fun na ya n'ụzọ.